Voaroban’ny jiolahy ny vola 30 tapitrisa Ar: voatifitra teo amin’ny tendany sy ny sorony ilay mpitam-bolana orinasa | NewsMada
Avotra ihany ny ain’ilay lehilahy, na dia naratra mafy noho ny tifitra intelo (teo amin’ny sorony sy ny tendany, ary teo amin’ny lamosiny) aza izy. Lasan’ireo jiolahy kosa ny volabe 30 tapitrisa Ar. avy nalainy tao amin’ny banky.
Nitrangana fanafihan-jiolahy nitam-piadiana mahery vaika indray tao Toliara, omaly antoandro teo amin’ny sampanana eo amin’ny biraon’ny hetra Toliara. Mpitambolan’ny orinasa Copefrito avy naka vola tao amin’ny banky iray ao an-toerana no notafihin’ny jiolahy teo amin’io toerana io. Vola saika entina hanangonam-bokatra fanaon’ny orinasa no lasan’ny jiolahy tampoka tao anatin’ny fotoana fohy. Araka ny fitantaran’ireo olona nanatri-maso, jiolahy roa no nanakana ny posy nitondra ity mpitambola ity ka tsy nihambahamba nitifitra azy intelo. Vokany, voatifitra teo amin’ny tendany sy ny sorony ary ny lamosiny ilay mpitam-bola. Lasan’ireo jiolahy avy hatrany ny kitapo nisy ilay vola 30 tapitrisa Ar ka nandositra nihazo ny avenue Monja Jaona ry zalahy. Fotoana fohy taorian’ny fanafihana, tonga haingana teny an-toerana ny polisy misahana ny ady heloka bevava nanao ny fanadihadiana rehetra.
Anaovan’ny polisy fanadihadiana ilay mpitondra posy…
Nahitana vodim-bala ana mpitandro filaminana teny an-toerana, nandritra ny fitsirihana nataon’ny polisy. Hatreto aloha, tsy mbola fantatra mazava ny tobi-miaramila nivoahan’ity fitaovam-piadiana nentina nanafihana ity. Nanaovana fanadihadiana any amin’ny polisy ilay mpitondra posy. Ilay naratra kosa nentina notsaboina ao amin’ny Clinique Saint Paul ao Andaboly. Nambaran’ny mpitsabo fa tsy nahavoakasika ny taovany ny bala ka tsy misy atahorana ny ainy, saingy mbola manaraka fitsaboana kosa izy. Tsy mbola hita kosa ireo nahavanon-doza tamin’ity fanafihana ity. Mitohy, araka izany, ny fanadihadiana ilay mpitarika posy, izay marihina fa posin’ny orinasa ihany ity nentin’ilay mpitam-bola nakana vola tany amin’ny banky. Ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny polisy, araka izany, no hahafantarana ny marina rehetra momba ity fanafihana ity. Matetika ahitana trangana fanafihan-jiolahy ao an-tampon-tanànan’i Toliara na eo aza ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana, tsy kely lalana kosa ny ratsy.